Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Emirates isungula iDaily New ukuya eMiami Flight
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inqwelo moya yakwaEmirates idibanisa iindawo ezimbini zokuzonwabisa kunye neendawo zeshishini ngenkonzo yokuqala engapheliyo.
Inkonzo entsha ye-Emirates eMiami ibonelela ngendawo yokufikelela eyongezelelweyo ukuya naseFlorida.
Indlela entsha yandisa inethiwekhi yase-Emirates yase-US iye kwiindawo ezili-12 kwiinqwelomoya ezingaphezu kwe-70 ngeveki.
Inkonzo entsha idibanisa abahambi abasuka eMiami, kuMazantsi eFlorida, eMzantsi Melika naseCaribbean ukuya kwiindawo ezingaphezu kwama-50 ngaphesheya koMbindi Mpuma, eNtshona Asia, eAfrika, eMpuma Ekude naseziQithini zoLwandlekazi iIndiya ngeDubai.
I-Emirates idibanisa ishishini lehlabathi kunye nabakhenkethi bokuzonwabisa kunye nenkonzo yokuhamba yabakhweli yokuqala phakathi dubai kunye neMiami. I-airline ibhiyozele ukumiliselwa kwenkonzo yayo entsha ephindwe kane-ngeveki namhlanje, xa uhambo lokuqala lwangena Miami ngo-11: 00 AM ixesha lendawo.
EmiratesUhambo lwenqwelomoya EK213 lwamkelwa sisikhululo senqwelomoya saseMiami ngesikhahlela senkanunu yamanzi kwaye satsala abaphulaphuli, abalandeli beenqwelomoya kunye neendwendwe ukuba zibhiyozele. Kwinqwelomoya yokuqala, inqwelomoya yasebenza ngeBoeing 777 Game Changer, eneendawo ezibanzi, ii-suites zabucala zeklasi yokuqala yoyilo eziphefumlelwe yiMercedes-Benz S-Class.
Kunye nenkonzo yayo yangoku eOrlando, inkonzo entsha e-Emirates eya eMiami ibonelela ngendawo yokufikelela eyongezelelweyo isuka eFlorida kwaye yandisa inethiwekhi yase-Emirates yase-US ukuya kwiindawo ezili-12 kwiinqwelomoya ezingaphezu kwe-70 ngeveki, inika abakhweli ukhetho oluninzi kunye nokunxibelelana okufanelekileyo kwinethiwekhi ye-Emirates ukuya EMazantsi eFlorida. Ikwadibanisa abahambi abasuka eMiami, kuMazantsi eFlorida, eMzantsi Melika naseCaribbean ukuya kwiindawo ezingaphezu kwama-50 ngaphesheya koMbindi Mpuma, eNtshona Asia, eAfrika, kwiMpuma Ekude nakwiiIlwandlekazi zaseIndiya ngeDubai.
U-Essa Sulaiman Ahmed, usekela-Mongameli weCandelo, e-USA nase-Canada uthe: “Siyavuya ukuqala inkonzo yethu ekudala siyilindele phakathi kwe-Dubai neMiami kubahambi. Silindele ukuba le nkonzo iza kuduma kubathengi bethu abafuna amava amatsha njengoko amazwe afana ne-UAE kunye ne-US beqhubela phambili oomatshini babo bokugonya kwaye nehlabathi livule ngokukhuselekileyo uhambo lwamazwe aphesheya. ”
“Ngofikelelo olukhulu olunikezelwa yinkonzo entsha ye-Miami, silindele ukuba ivelise ibango eliphezulu, ukuphucula ishishini, ukuhamba ngenqanawa kunye nokuzonwabisa kunye nokwenza ubudlelwane obuninzi kwezoqoqosho nokhenketho phakathi kwezi zixeko zombini nangaphaya. Sizimisele ukukhulisa imisebenzi yethu siye e-US ngokuhambelana nemfuno eyandayo yokuhamba ngenqwelomoya kwaye singathanda ukubulela abasemagunyeni kunye namaqabane ethu eMiami ngenkxaso yabo. Sijonge ukubonelela ngemveliso yethu eyodwa kunye nenkonzo ephumelele amabhaso kubahambi. ”